Ny Trano Fonenana Trano havana ho an'ny ankohonana ny Monochromatic Space ary ny fanovana ny haben-java-miaina amin'ny ambaratonga rehetra ahafahana mametraka ny filàna manokana an'ny tompony vaovao. Tsy maintsy ho sariaka ho an'ny be taona izany; manana endrika endrika anatiny; fitahirizana marobe miafina; ary ny famolavolana dia tsy maintsy mampiditra azy ireo hampiasa ireo fanaka taloha. Summerhaus D'zign dia nirotsaka ho mpanolo-tsaina momba ny famolavolana anatiny izay mamorona sehatra ilaina ho an'ny fiainana andavan'andro.
Ny Tranon'ny Lamban'ny Ankizy
Alahady 6 Jona 2021
Ny Tranon'ny Lamban'ny Ankizy Ny fahitan'ny faritra sy ny manontolo dia mandray anjara amin'ny geometrika, mora fantatra mazava tsara izay manome lanja ny vokatra amidy. Nohamafisin'ny alàlan'ny vatan-jaza lehibe ny fahasahiranana izay nanakorontana ny habakabaka, efa misy farafara kely. Ny safidy ny fironana ny valindrihana, ny fahazoan-dàlana misy ao amin'ny varavarankelin'ny fivarotana, ny vay ary ny lamosin'ny fivarotana, no fiandohan'ny sarisary amin'ny sisa amin'ny fandaharana; mivezivezy, fampirantiana, counter counter, dresser ary fitahirizana. Ny loko tsy miandany dia mibahana ny habaka, misy tsipika matanjaka manamarika sy mandamina ny habaka.
Efitra Fisehoana Ny Scotts Tower dia asa fivelomana voalohany ao afovoan'i Singapore, natao hanatrarana ny fangatahana trano fonenana be dia be sy miasa tsara ao an-tanàn-dehibe amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny mpandraharaha an-trano sy matihanina tanora. Mba hanehoana ny fahitana fa ny mpanao maritrano - Ben van Berkel ao amin'ny UNStudio - dia manana 'tanàna mitsangana' miaraka amina zoro miavaka izay matetika mihanaka ara-jotra miampita amin'ny tanàna iray, dia nanolo-kevitra izahay ny hamorona "habaka ao anaty habaka iray," izay mety hiova ny habaka niantso tamin'ny toe-javatra samihafa.
Ny Zaridaina Ao An-Trano
Zoma 4 Jona 2021
Ny Zaridaina Ao An-Trano Zaridaina manodidina ny villa manan-tantara ao afovoan-tanàna. Famolavolana lava sy tery miaraka amin'ny fahasamihafana misy ny 7m. Nizara ho ambaratonga 3 ny faritra. Ny zaridaina ambany indrindra ambany dia mitambatra ny takian'ny conservator sy ny zaridaina maoderina. Ambaratonga faharoa: zaridaina fialam-boly miaraka amin'ny gazebos roa - eo amin'ny tafon'ny dobo filokana sy ny garazy. Ambaratonga fahatelo: zaridaina ankizy Woodland. Mikendry ny hampiala ny saina amin'ny feon'ny tanàna sy hitodika mankany amin'ny natiora ny tetikasa. Izany no mahatonga ny zaridaina manana endri-javatra mahaliana sasany toy ny tohatra amin'ny rano sy ny rindrin'ny rano.
Ny Fivarotana Avy amin'ny ivelany sy anatiny mankany amin'ny tranobe manontolo dia feno fitaovana vita amin'ny mivaingana, ampiarahina amin'ny mainty, fotsy ary loko hazo vitsivitsy, miaraka amin'ny famoronana feo milay. Ny tohatra eo afovoan-tany dia lasa mitana andraikitra lehibe, karazana endrika mirehitra mirantsana dia toa ny kodiarana manohana ny gorodona faharoa ary mirotsaka amin'ny lampihazo mivelatra eo amin'ny tany. Ny habaka dia toa ampahany tanteraka.
Ny Trano Fisakafoanana Sy Ny Bar
Alarobia 2 Jona 2021
Ny Trano Fisakafoanana Sy Ny Bar Ny endrika fananganana trano fisakafoanana dia tokony hahaliana ny mpanjifany. Mila mijanona vaovao sy manintona ireo fironana amin'ny ho avy ny atiny. Ny fampiasana tsy mitanila dia fitaovana iray hitazomana ny mpanjifa miaraka amin'ny haingo. Kopp dia trano fisakafoanana iray averina amin'ity eritreritra ity. Kopp amin'ny fiteny Goan eo an-toerana dia midika zava-pisotro iray vera. Ny whirlpool noforonin'ny fisotroana zava-pisotro iray tamina vera dia noheverina ho toy ny hevitra iray mandritra ny famolavolana ity tetik'asa ity. Izy io dia mampiseho ny filozofia famolavolana ny famerenan'ny modely miteraka modely.
Vivit Collection Ny Kavina Sy Peratra Asabotsy 19 Jona
FinaMill Ny Lakozia Matanjaka Ao An-Dakozia Zoma 18 Jona
Catzz Fandriana Saka Alakamisy 17 Jona
Ny Trano Fonenana Ny Tranon'ny Lamban'ny Ankizy Efitra Fisehoana Ny Zaridaina Ao An-Trano Ny Fivarotana Ny Trano Fisakafoanana Sy Ny Bar